ဟိုဟိုဒီဒီလေးတွေ ပြောပြမယ်လို့ ဂတိတလှေကြီးပေးပြီး ပေါ်မလာအတော်ကြာသွားတာ၊ခွှင့်လွှတ်ပါလို့ 
အိမ်ပြောင်းတာ အလုပ်သမားရှာလည်းမရ၊သိတဲ့လူလည်းမရှိ..၂ယောက်ထဲ ၄ ရက်တိတိပစ္စည်းတွေ
ရွှေ့ ရတာအီစလံဝေသွားပြီး၊လက်ချောင်းထိပ်တွေ နာနေလို့ ကွန်ပြူတာလက်ကွက်ကိုမနှိပ်ချင်ဘူးလေ။
ပိုက်ဆံသက်တာသွားပေမဲ့ လူက မသက်တာချက်....ဗျ...:(
ပစ္စည်းသိမ်းတုံးကလည်းချက်ဖို့ ပျင်း၊ပြောင်းတဲ့အချိန်လည်းမအားလို့ ၊ ပြောင်းပြီးသွားလည်းယောင်ခြောက်
ဆယ်လုပ်ပြီးပျင်းနေတာနဲ့ အပြင်စာfirst-food တွေစားဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာရေးအရကြည့်ရင်တကယ်မ
ဗီဇာဆိုင်မှာ ချိစ်နဲနဲလေးဘဲပါမယ်ဆိုပြီးမှာကြည့်တာ spinach & cheese တဲ့
အစားအသောက်ကိုဟိုဟာဒီဟာနဲ့ ချေးများတတ်ပေမဲ့ ပျင်းလာရင်ရေတောင် ထမသောက်ချင်တဲ့ လူတန်း စားလေ ဒီတော့ ဝယ်စားတာပေါ့....ပြီးခဲ့တဲ့လကတဲက ချိစ်တွေဘာတွေ ဆက်တိုက်စားမိတယ်..
ဂျပန်ဆိုင်တဲ့၊salad တွေရတယ်ဆိုလို့ ..ဂဏန်းဆလတ်တဲ့...ခေါက်ဆွဲလိုလိုဘာလိုလိုနော်...အပေါ်ကဆမ်း
အမျိုးသားအလုပ်ထဲလိုက်သွားတာ သူ့ အလုပ်ထဲကလူတွေဝယ်ကျွေးတယ် chicken & vige pizzaတဲ့
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်သွားဝယ်တာ spinach & cheese pizza လေ.. အချိုတည်းတာက
chocolate ice-cream cup cake နဲ့ ...cocktail သောက်သေးတာနော်...အဟီး..မိုက်ထှာ
မွေးနေ့ မှာ အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်လေ...နေ့ လည်စာကိုညနေမှစားရတာ..အဲဒါမွေးနေ့ အစားအစာတဲ့ :(
မျက်မှန်အသစ်သွားလုပ်တုံးက ဆေးခန်းဘေးကဆိုင်မှာဝယ်ခဲ့တာ..rokula cheese pizza နဲ့ garlic knots.
ချိစ်ဖြူးကြက်သွန်ဖြူပေါင်မုန့် ခေါ်ရမလားမသိပါဘူး..၃လုံးမှ ၁ဒေါ်လာထဲပေးရတာ..
ရက်ပေါင်း၃ဝ အတွင်းထောပတ်တွေချိစ်တွေတလှေကြီးစားမိပြီး မအီမသာဖြစ်လိုက်တာ...
နေ့ တိုင်းစားနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ တကယ်ချီးကျုးပါတယ်လေ...။
ကျမဗီဇာစားရင်လူကြားထဲမှာမစားရဲဘူး..စက္ကူနဲ့ အပေါ်ကဆီတွေကိုစုပ်ရသေးတယ်လေ..သူများတွေတွေ့ 
ကိုးရီးယားဆိုင်သွားပြီး လာတီးနို(စပိန်စကားပြောတဲ့ လက်တင်အမေရိက ကလာတဲ့သူတွေ)ချက်တဲ့၊
ဗီယက်နမ်ခေါက်ဆွဲ ကိုရှမ်းမ စားခဲ့တာပါ..ထည့်ပေးလိုက်တဲ့လင်ပန်းကြီးကိုဘယ်ရတာကပိုမောတယ်
ကြီးမားလှသော ဇလုံ..အင်တုံ နဲ့ ကိုရောင်းတာဘဲနော်..ဘယ်သူတွေစားလို့ ကုန်ကြမလဲ....
တခါဝယ်ရင် ၂ ထုတ် ၃ ထုတ်..ကျမတော့သိပ်မကြိုက်ပါဘူး..။
သူ့ ကိုကျတော့ မိုင်ကရိုဝေ့နဲ့ ပြန်နွေးလို့ မကောင်းဘူး..မီးအေးအေးလေးနဲ့ ပြန်လှော်ပေးရုံပါဘဲ။
ဒါကကျမတို့ ရှမ်းလိုဆိုရင် ခေါက်ယာကု လို့ ခေါ်တာဘဲ ကြံသကာနဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းပေါ့..အလှုတွေမှာ
တွေ့ လား...ကြံသကာကိုအများကြီးမထဲ့လို့ အရောင်မရဲတာပါ။အုန်းသီးဖတ်လေးတွေပါထဲ့ထားတော့ အုန်းနို့နံလေးမွှေးပြီး စားကောင်းလိုက်တာ...မနက်စာအတွက်အများကြီးလုပ်ထားပြီး တနေ့ နဲနဲစီစားတယ်။
အထဲမှာဖော့ဗူးလေးနဲ့ ၃ဗူးပါတယ်။တခါလုပ်စားရင်တဗူးနူန်းနဲ့ ၊ထမင်းနဲ့ တခါကြော်စားတယ်။ ဒီတခါကဂျင်းနဲ့ ငရုတ်သီးနဲ့ ကြက်သွန်မိတ်(တကယ်ဆိုနံနံပင်ထဲ့ရတာပါ မရှိလို့ ) ကျွတ်ကျွတ်ကြော်စားတယ်။ထမင်းပူပူလေးနဲ့ စားလို့ ကောင်းတယ်လေ...။
နောက်နေ့ နံနံပင်နဲ့ ကြော်ထားတာ...
အိမ်မှာဂျင်းသုပ်စားချင်လို့ ပုဇွန်ခြောက်ရှာဝယ်တာ မိတ်အင်ချိုင်းနားဘဲတွေ့ မိတယ်...။ဟင်းဟင်း...
အသက်သာအသေခံမယ် မိတ်အင်ချိုင်းနားနဲ့ ရောဂါအဖြစ်မခံချင်ပါဘူး။တနေ့ ကသတင်းထဲမှာတွေ့ မိတယ်
တိရိစ္ဆာန်စွန့် ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆီချက်ပြီးစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေဆိုင်တွေပြန်သွင်းတာတဲ့...။
တရုတ်ပြည်မရောက်ဖူးတာဘဲ ကျေးဇူးတင်ရမလိုလို..မိတ်အင်ချိုင်းနားကို..သူတို့ တိုင်းပြည်မှာဘဲသုံးကြ
ဒီတော့ ကိုယ်တိုင်မူလလက်ဟောင်း ပုဇွန်ခြောက်လုပ်ပြီး စားကြည့်တာ မဆိုးဘူးဗျ။ဆားလည်းပေါ့သလားမမေးနဲ့ ...ဆားကိုမထဲ့မိလို့ ..နောက်တခါဆားနဲ့ နယ်ပြီးပြန်လုပ်ရတယ်..။
ကျက်ပြီးခဲထားတဲ့အကောင်အသေးဆုံးပုဇွန်ကိုရေဆေးပြီး ဒယ်အိုးထဲထဲ့လှော်..ရေခန်းတာနဲ့ အိုဝင်မှာ ၁ရဝ
လောက်အပူပေးပြီး ၄၅ မိန်စ်လောက်ပစ်ထားလိုက်တာ..ကြွတ်ရွှနေတဲ့ပုဇွန်ခြောက်ရလာတာဘဲ...
ဟော...မွှေးမွှေးအိအိလေး..ငရုတ်ချဉ်နဲ့ တို့ စားကောင်းပါဧ။်..
တို့ စရာအသီးအရွှက်တပန်းကန်..ဆို...ကျမရဲ့ နတ်သုဓ္ဒာ.ပါဘဲလေ...
အိတ်သွန်ဖာမှောက်ပွဲနဲ့ ဘလော့ဒေးနေ့ ဆိုတာလည်း..တပတ်လောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့...
တရေးနိုးမှထအော်သလိုဖြစ်နေပါပြီလေ..ဟီး..happy blogger day...
ဒါပေမဲ့ မယ်မီးတော့ အိတ်ဘဲသွန်ပြတာဟုတ်ပါဘူးနော်...
ဘဝတခုလုံးသွန်မှောက်ပြသ ဘလော့ကင်းနေပါကြောင်း.... :)))))
အော်...ဒါနဲ့ ...ကျမရဲ့ မိတ်ဆွေများဘာဟင်းတွေချက်စားကြပါသလဲရှင်....
ဝယ်စားလိုက်ချက်စားလိုက်နဲ့ ..ကျမလိုပေါ့နော်...ကျမဟင်းတွေကတဖြေးဖြေးနဲ့ ဆီတွေပျောက်လို့ ခြောက်
Posted by မီးမီးငယ် at 8:11 AM
Anonymous September 09, 2013 1:47 PM
မီးမီးငယ် September 10, 2013 11:23 AM
မီးမီးငယ် September 10, 2013 11:25 AM
Anonymous September 09, 2013 9:05 PM
How are you meemee?
anyway keep going..
မီးမီးငယ် September 10, 2013 11:26 AM
ဆုမြတ်မိုး September 09, 2013 9:30 PM
ခေါက်ယာဂုလေးစားချင်တယ်တော့.... အစားအစာတွေစုံနေတာပါပဲလားမမီးရယ်..ဆုမြတ်က တို့ဖူးမကြိုက်ဘူး ။ ဆုမြတ်ရဲ့တောင်ကြီးသားကတော့တို့ဖူးအရမ်းကြိုက်တာ...း) စကားမစပ် မမီးဆိုရင်ဟင်းထုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်မလားပဲ ။ ဆုမြတ်လုပ်ကြည့်တာဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူး ။ ငပျောရွက်ကလည်းမရှိတော့ ပလတ်စတိတ်နဲ့ထုတ်ရတာလေ..။ ဘာတွေမှားလဲမသိဘူး ။ သုံးခါရှိပြီ သုံးခါလုံးအဆင်မပြေဘူး ။ အဆာပလာကတော့ ဆန်မှုန့်တစ်ထုပ် ၊ ကောက်ညှင်းမှုန့်တစ်ဇွန်း ၊ ခ၇မ်းချဉ်သီး ၊ ကြက်သွန်မိတ်ကို ရေကြဲကြဲနဲ့ပေါင်းတာပါပဲ ။အမြဲတမ်းမာမာသွားလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး ။ ချက်နည်းလေးသင်ပေးပါဦးနော် မမီးး) လုပ်ကျွေးချင်လို့ ။
မီးမီးငယ် September 10, 2013 11:43 AM
အလွန်ဆုံး ၄၅ မိနစ်လောက်ဆိုရပြီ..။
ရှမ်းလိုတောင် ညောင်ရွှေကမုန့် လို့ ခေါ်တာဘဲ.။
Anonymous September 09, 2013 11:03 PM
အိမ်ပြောင်းတာကူမဲ့သူမရှိတော့တော်တော်ပင်ပန်းမယ်။ ကုိုယ်တွေကူမဲ့သူရှိတာတောင်အီစလံကိုဝေနေတာဘဲ။
ရှမ်း သို့ မြန်မာတုိုဖူး ကြိုက်တယ်။ ပဲပြားကတော့ သုတ်စားအစာသွတ်စားရင်ကြိုက်ပေမဲ့ ကျန်တာသိပ်မကြိုက်ဘူး။
Spinach cheese အတွဲဆုိုတော်တော်များများပုံစံကြိုက်တယ်။
ကုိုယ်လည်းတစ်ဘူးကိုတစ်ခါချက်တယ်။ အတော်ပါဘဲ။ နဲပေမဲ့။
မီးမီးငယ် September 10, 2013 11:50 AM
၂ရက်တောင်...ဖျားသွားလို့:(
သူတို့ တွေဒီလိုစားလို့ ဂျပန်မလေး၊ကကြီးမလေးတွေ၊
Soybean ကအရမ်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ ပါ..အဟဲ..
ပုဇွန်ခြောက်နဲ့ ဂျင်းသုပ်ကပိုမိုက်တာ..သိလား.. :)
Thu September 09, 2013 11:17 PM
တီတီမီးလိုပဲ အသားမပါလဲပဲပြားတို့ ပဲတို့ အသီးအရွက်တို့ပါရင်ထမင်းမြိန်တယ်..:)
Yummy Yummy ရှလွတ်
မီးမီးငယ် September 10, 2013 11:51 AM
ရေ...အများကြီးနဲ့ စိမ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့ နော်
Cameron September 10, 2013 3:07 AM
အစပိုင်းကြည့်တော့ အီလည်လည်ဖြစ်သွားတယ်မမီး...။ နောက်ပိုက်းဟင်းလေးတွေက အိမ်ချက်လေးတွေဆိုတာ့ သရေတောင်ကျတယ် ဟိဟိ..။ အိမ်ပြောင်းတော့ တော်တော်လေးပင်ပန်းသွားတဲ့ကြားက ဘလော့ကစာဖတ်သူတွေအတွက်...ကြိုးစားပြီး ပုံတွေတင်ပေးတာကျေုးဇူးပါ... ဟက်ပီဘီလိတ်တစ်ဘလော့ဒေးပါ..။
မီးမီးငယ် September 10, 2013 11:55 AM
စူးနှယျလေး September 10, 2013 5:35 AM
မမီးငယ် ချက်ထားတဲ့ အောက်ဆုံးဟင်း ၂ခွက်...အရမ်း အရမ်းကိုကောင်းမယ့်ပုံပဲ... ပဲပုပ်ချက်လည်းကြိုက်တယ်။ အရည်စပ်စပ်လေးချက်ပြီး မုန်ညင်းရွက်ပြုတ်လေးနဲ့ ကပ်စား... ရှလွတ်.. :)
မီးမီးငယ် September 10, 2013 11:58 AM
နောက်တခါချက်မှ ပုံလေးတင်အုံးမယ် :)
စူးနှယျလေး September 11, 2013 5:24 AM
အပေါ်ကညီမတယောက်မေးထားတာ ကိုယ်လည်းကြုံဖူးလို့ မမီးငယ်အစားဖြေပေးလိုက်တယ်နော်..ကိုယ်လုပ်တုန်းကလည်း မာနေတာနဲ့ နောက်တော့မှ စမ်းသပ်ရင်း သိသွားတယ်။ ဆန်မှုန့်နဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်အချိုးအဆ မမှန်လို့ပါ။ ဆန်မှုန့်ကို နည်းနည်းပဲထည့်၊ ကြက်သွန်မြိတ်မတရားများများထည့်၊ အချိုးအဆ အတိအကျ မပြောနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဆီလေးနည်းနည်းလည်းထည့်။ ဒါဆိုရပြီ။
မီးမီးငယ် September 11, 2013 10:18 AM
San San Htun September 11, 2013 1:12 PM
အနီးအနားဆို လာကူပေးချင်သား...အိမ်ပြောင်းတာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းမှန်း ကိုယ်တိုင် ခံစားဖူးလို့သိတယ်..ပုဇွန်ခြောက်လုပ်နည်းက မိုက်တယ်...သာမီးက ပင်လယ်သူဆိုတော့ ပဲပုပ်တို့ ၊ ပဲပြားတို့သိပ်မကြိုက်ပေမယ့် စုံအောင်တော့ စားနေတယ်...ဟတ်ပီးဘီလိတ်တက်စ် ဘလော့ဒေး မမီး...ပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂင်း ကြပါစို့ ...း)
မီးမီးငယ် September 13, 2013 8:33 PM
Kai September 12, 2013 12:27 PM
စားစရာတွေ ကြည့်ရတာ သွားရည်တွေ ကျလာတယ် မမီးငယ်ရယ်.... စူးနွယ်လေးပြောလို့ ရောက်လာပါတယ် အမြဲတမ်းလာဖတ်တော့မယ်
မီးမီးငယ် September 13, 2013 8:34 PM
ဆွေလေးမွန် October 26, 2013 1:51 AM
မမီးရယ် ခုမိတ်အင် ချိုင်နားကို သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် မသုံးတော့ပါဘူးကွယ်
ယုတ်စွအဆုံး iphone တောင် ဟောင်ကောင်ကနေလာဝယ်ပါသတဲ့
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့လဲ မိတ်အင်ချိုင်နား ကြောက်လှပါသတဲ့..
မီးမီးငယ် October 26, 2013 8:22 PM
လူမျိုးနဲ့ သိမ်းကျုံးပြောလို့ မဖြစ်တော့ဘူးနော်၊
လူတဦးချင်းရဲ့ စာရိတ္တနဲ့ ဘဲဆိုင်တယ်လို့ ပြောရမှာ။